समलिङ्गी भन्छन्– ससुरालीले समेत स्वीकार्यो, राज्यले कहिले स्वीकार्छ ? « Naya Page
समलिङ्गी भन्छन्– ससुरालीले समेत स्वीकार्यो, राज्यले कहिले स्वीकार्छ ?
भैरहवा, ७ माघ : सरोकारवालाहरुले समलिङ्गीबीच हुने विवाहालाई कानुनी मान्यता दिनको लागि आग्रह गरेका छन् । ११ बर्षदेखि समलिङ्गी सम्वन्धमा रहेका सुमन चेपाङले समलिङ्गी विवाहलाई कानुनी मान्यता नदिदाँ कानुनी रुपमै विवाह गरेर बस्न नपाएको बताउदै मान्यता दिन आग्रह गरे ।
नील हिरा समाजले भैरहवामा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायका विषयमा संचारकर्मीसँग गरेको अन्तरक्रियामा उनीहरुले यस्तो गुनासो गरेका हुन । चेपाङले आफूलाई घरमा सबैले स्वीकारेको बताउँदै समलिङ्गी विवाह गरेर धर्मसन्तान राख्न पाउनेसम्मको कानुन बनाउन राज्यलाई दवाव दिनु पर्ने बताए । सुमन ११ बर्षदेखि बिष्णु माया चेपाङसँग समलिङ्गी सम्वबन्धमा छन ।
१२ बर्षदेखि समलिङ्गी सम्वबन्धमा रहेका विनोद विसीले पोखराबाट आफूसँग भागेर आएकी महिलाको परिवारले आफ्नो परिवारलाई नै मानवबेचखिन विरुद्धको मुद्धा हालेको बताइन । विसीले कानुन नबन्दा धेरै हण्डर खेप्नु परेको बताए । विनोद अहिले गुल्मीकी पूजा थापासँगको समलिङ्गी सम्बन्धमा छन् । सुसरालीमा आउजाउ भइरहेको बताउँदै विसीले अहिले धेरै राम्रो भइरहेको सुनाए । तर, कानुन नबन्दा समलिंगी विवाह गरेर धर्मसन्तान राख्न नपाएको विसीको भनाई छ ।
तेस्रोलिङ्गी शाहबुद्धिन खाँले सानै उमेर विवाह भएकाले अहिले लुकीछिपी महिला व्यवहार देखाउने गरेको बताए । अर्काकी छोरीको भविष्य हेरेर परिवारमा खुल्न नसकेको उनको भनाई थियो । रुपन्देहीमा ५ हजार यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक नील हिरा समाजको सम्पर्कमा आएका छन् । नील हिरा समाजले भैरहवामा पत्रकारसँग गरेको अन्तरक्रियामा समाजको शाखा कार्यालय भैरहवाकी कार्यक्रम संयोजक मनिला न्यौपानले अहिलेसम्म ५ हजार यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक सम्पर्कमा आएको जानकारी दिएकी हुन् ।
रोजीरोटीको समस्याका कारण रुपन्देहीमा खुल्नेको संख्या धेरै भए पनि धेरै विदेश जाने गरेको बताइन् । मेधसी समुदायमा सानै उमेरमा विवाह गरिदिदाँ झन समस्या आउने गरेको न्यौपानेको भनाई छ । तेस्रोलिङ्गी अधिकारकर्मी आनिक रानाले पहिचान अनुसारको नागरिकता मात्रै दिएर अरु अधिकारबाट आफ्नो समुदायलाई राज्यले बञ्चित गराएको बताइन् । उनले विरामी भएर उपचार गराउन अस्पताल जादाँ समेत विभेदमा परेको बताइन् । नेपाल रोल मोडमा फष्ट रनरअपको उपाधी पाएकी अवान्तिका घर्तीले समाजको हेर्ने दृष्टिकोणमा विस्तारै परिवर्तन आउन थालेको उनको भनाइ छ ।